Sein Win, left, cousin of Myanmar’s opposition leader Aung San Suu Kyi, acceptsacertificate of honourary citizenship on her behalf from Foreign Minister Maxime Bernier duringaceremony on Parliament Hill yesterday.Type your summary here.Cousin of politician acceptshonourary citizenship for herTorstar News ServiceMay 05, 2008 10:05Awarding Canadian honorary citizenship to Aung San Suu Kyi, the symbol of democratic hopes in Myanmar, sendsastrong message to the military regime ruling that country, says her representative abroad.Sein Win, who heads Suu Kyi’s government in exile, thanked the federal government for the honour and urged Canada and other countries to continue pressing the military junta for democratic reforms.“This is the time for sanctions, this is the time for keeping up pressure,” said Win, who accepted the award on Suu Kyi’s behalf inaceremony on Parliament Hill.The ceremony took on an urgent note because of the devastation caused in Myanmar by Cyclone Nargis.Win urged international aid agencies to move quickly to bring relief supplies into Burma and expressed hope that the military regime would allow the agencies into the country.“The time is running out, it is an urgent operation. We know how our people suffered. They have nothing to eat and in Ragoon, there is no drinking water.”Bernier said Canada will continue to enforce the economic sanctions it imposed in November after authorities there mountedabloody crackdown on pro-democracy protesters.
Language test for everyoneSkilled workers, business applicants face new hurdleImmigration by Guidy MamannMay 05, 2008 11:41The folks at the Department of Citizenship and Immigration in Ottawa are keeping real busy these days.In addition to other recent announcements, they have just introduced their third major piece of legislation designed to amend our immigration regulations.A recap is in order.Firstly, the feds have Bill C-17 pending. This bill aims to deny work permits to foreign strippers headed for Canada withaview of protecting them from our licensed, but “exploitive,” strip clubs.Then there is Bill C-50, which is also onabumpy road to passage. Changes to our immigration regulations were tucked into this budget bill and seek to turn our minister of immigration, and her successors, into super ministers who can proclaim new immigration rules without parliamentary, cabinet, or public input or oversight.Now, we haveathird proposed regulatory amendment that introduces two main initiatives.First, we’ll start with the good news.CIC proposes to simplify the landing process for applicants in the skilled worker class and the business classes. These applicants will still be required to send their applications to visa posts outside Canada for processing. However, those who find themselves in Canada in lawful temporary status (i.e. as workers or visitors) at the time that their immigrant visas are issued overseas will be able to get landed here without leaving the country. Presently, they would have to drive or fly to the nearest Canadian port of entry to seek landing. This welcome change will, undoubtedly, avoidalot of unnecessary schlepping.Now, the not-so-good news.It is proposed that all applicants in the skilled worker class, and in the business class (i.e. investors, entrepreneurs, and the self-employed) undergoaformal third-party language test in English or French regardless of their nationality, mother tongue, or language of instruction.At present, applicants in these categories can elect to undergo suchatest or submit other evidence of their abilities in one of our official languages.However, the department feels that assessing such alternative evidence is slowing down its officers. The department considered issuinganarrow exemption for “native English or French speakers” but couldn’t finda“clear and fully defensible definition” of one. Instead, it proposes to require everyone to do the test.While this is being touted as “fair,” I can’t wait to see the looks on the face of some American or British-born engineer or businessman, or perhapsaFrench poet, when I tell them they need to undergo language testing and they may have to fly or drive for hours to get to the nearest test site.This doesn’t make us look “fair.” It makes us appear as if we lack basic common sense.Given my own Canadian education and work experience I’d be miffed if I were to be asked to do an English test if I were immigrating to the U.S. or U.K.Other countries have defined fair exemptions to language testing.So should we.Technorati Profile
Latest News from BurmaCyclone kills at least 351 in Myanmar, state-run TV reportsMay 5, 2008YANGON, Myanmar (Map, News) - A powerful cyclone killed more than 350 people, destroyed thousands of homes and knocked out power in the country’s largest city, state-run media said Sunday. Tropical Cyclone Nargis struck early Saturday with winds of up to 120 mph, the military-run Myaddy television station said.Shari Villarosa, the top American diplomat in Yangon, said trees and electricity lines were down in the city after the storm’s whipping winds and torrential downpour.“Our Burmese staff have lost their roofs,” she told The Associated Press. “There is major devastation throughout the city.”Five regions of the impoverished Southeast Asian country have been declared disaster zones.At least 351 people were killed, including 162 who lived on Haing Gyi island off the country’s southwest coast, state-run television said. Many of the others died in the low-lying Irrawaddy delta.“The Irrawaddy delta was hit extremely hard not only because of the wind and rain but because of the storm surge,” said Chris Kaye, the U.N.’s acting humanitarian coordinator in Yangon. “The villages there have reportedly been completely flattened.”State television reported that in the Irrawaddy’s Labutta township, 75 percent of the buildings had collapsed.The U.N. planned to send teams Monday to assess the damage, Kaye said. Initial assessment efforts have been hampered by roads clogged with debris and downed phone lines, he said.“At the moment, we have such poor opportunity for communications that I can’t really tell you very much,” Kaye said.Witnesses in Yangon said the storm’s 120 mph winds blew the roofs off hundreds of houses, damaged hotels, schools and hospitals, and cut electricity to the entire city.The state-owned newspaper New Light of Myanmar reported Sunday that the international airport in Yangon remained shut. Domestic flights have been diverted to the airport in Mandalay, it said.“It’sabad situation. Almost all the houses are smashed. People are inaterrible situation,” saidaU.N. official in Yangon, who requested anonymity because she was not authorized to speak to the media.“All the roads are blocked. There is no water. There is no electricity,” she said.Yangon residents ventured out Sunday to buy construction materials to repair their homes. The price of gasoline jumped from $2.50 to $10agallon on the black market and everything from eggs to construction supplies had tripled, residents said.Some people expressed anger that the military-led government in Myanmar, also known as Burma, had done little so far to help with the cleanup.“Where are all those uniformed people who are always ready to beat civilians?” said one man, who refused to be identified for fear of retribution. “They should come out in full force and help clean up the areas and restore electricity.”The Forum for Democracy in Burma and other dissident groups outside of Myanmar called on the international community to provide urgent humanitarian assistance and urged the military junta to allow aid groups to operate freely - something it has been reluctant to do in the past.“International expertise in dealing with natural disasters is urgently required. The military regime is ill-prepared to deal with the aftermath of the cyclone,” said Naing Aung, secretary general of the Thailand-based forum.A Western diplomat, who spoke on condition of anonymity because of the sensitivity of the issue, said it was difficult for other countries to help unless they receivedarequest from Myanmar’s military rulers.“We have to be welcomed by the host government,” the diplomat said. “The international community is willing to provide humanitarian assistance. There has been tremendous destruction. At the end of the day, the government needs to let in the assistance.”Michael Annear,aregional disaster management delegate for the International Federation of the Red Cross in Bangkok, said his agency had teams in Yangon on Sunday distributing shelter kits and other relief supplies.The cyclone came atadelicate time for Myanmar, which is scheduled to holdareferendum May 10 on the country’s military-backed draft constitution. Authorities have not yet said whether they would postpone the vote.A military-managed national convention was held intermittently for 14 years to lay down guidelines for the country’s new constitution.The new constitution is supposed to be followed in 2010 byageneral election. Both votes are elements ofa“roadmap to democracy” drawn up by the junta, which has been in power for two decades.Critics say the draft constitution is designed to cement military power and have urged citizens to vote no.Rescue crews take over in RangoonMay 5, 2008Big News Network.com: Rescue operations are under way in Myanmar after cyclone Nargis killed an estimated 350 people and causing widespread damage.The country’s military rulers have declared disaster areas in five regions, including the main city Rangoon.The death toll is expected to soar once rescue workers reach isolated areas.Worst hit is the Irrawaddy delta, where television footage showed damage to many public and government buildings, roofs blown off buildings, downed trees, and telephone poles blocking roads.The powerful storm knocked out state-run radio, television, telephone and Internet services.U.N. officials in neighboring Thailand say local and international relief workers have met to assess the damage.There is no word whether the storm damage will affect next Saturday’s scheduled constitutional referendum.The cyclone, which reached wind speeds of up to 240 kilometres per hour, is now headed for Thailand but is weakening.
မုန်တိုင်းကြောင့် သေဆုံး ၄၀၀၀ ၊ ပျောက်ဆုံး ၃၀၀၀May 5th, 2008 by adminရန်ကုန်မြို့အပါအဝင် ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသများကို ပြင်းထန်စွာ ဖြတ်သန်းတိုက်ခိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့် လူ ၄၀၀၀ ကျော်သေဆုံး၍ ၃၀၀၀ ကျော် ပျောက်ဆုံးနေပြီးထောင်ပေါင်း များစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ကြောင်း နေပြည်တော်အစိုးရ ရေဒီယိုက ကြေညာသည်။ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်းတွင် မုန်တိုင်း ဒဏ်ကြောင့် သဘောင်္များ နစ်မြုပ်ခဲ့။ယင်းမတိုင်ခင် ဟိုင်းကြီး ကျွန်းတွင် လူ ၁၆၂ ဦး သေဆုံးမှု အပါအဝင် အနည်းဆုံး လူ ၃၅၁ ဦး သေဆုံးကြောင်း အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြားကလည်း ထုတ်ပြန်ကြေညာသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ မြေနိမ့်ပိုင်းတွင် တခြားသော သေဆုံးသူများရှိသေးသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။အဆိုပါ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ လပွတ္တာမြို့နယ်တွင် အဆောက်အဦး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ထိခိုက်ပျက်စီးကြောင်းလည်း အစိုးရ ရုပ်မြင်သံကြားက ကြေညာခဲ့သည်။ဧရာဝတီတိုင်း ပန်းတနော်မြို့တွင် အိမ်ခြေ ၆၀ ခန့် ပျက်စီး၍ ဘိုကလေးမြို့တွင် သေဆုံးသူများ၏ ရုပ်အလောင်း ၅၀၀ ခန့် တွေ့ရှိရကြောင်း ဒေသခံများက ပြောဆိုသည်။ယင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသသို့ သွားရောက်၍ သတင်းအချက်အလက်များယူရန် ပထမ ကြိုးစားမှု မှာ လမ်းများ ပိတ်ဆို့နေပြီး တယ်လီဖုန်းလိုင်းများပြတ်တောက်နေသည့်အတွက် မအောင်မြင်သောကြောင့် ယနေ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ လွှတ်ရန် စီစဉ်ထားသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုရေးရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အရာရှိ ခရစ္စ ကေရီက အေပီ သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။လူ ဦးရေ ၆.၅ သန်းခန့်ရှိသော ရန်ကုန်မြို့တွင်လည်း ထိုလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် တမြို့လုံးနီးပါး ကြီးမားစွာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ခဲ့သည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများကပြောသည်။မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဒုက္ခသည်များ သောက်သုံးရေ ပြတ်လပ်မှုကြောင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ရေတွင်းများကိုသာ အားထားနေကြရ။ (Photo: AFP)ယနေ့တွင် ရန်ကုန် မင်္ဂလာဒုံ နိုင်ငံတကာ လေဆိပ် နှင့် လေကြောင်းလိုင်းများ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သော်လည်း အများပြည်သူသုံး ခရီးသည်တင်ကားများ မပြေးဆွဲနိုင်သေးသည့်အတွက် အခက်အခဲများဖြစ်ကာ ကြားကား များဖြင့် သွားလာကြရပြီး ယင်းကားခများမှာ အနီးအနားသွားရာ၌ပင် ကျပ် ၅၀၀ -၁၀၀၀ အထိ ရှိနေကြောင်း လည်း သိရ သည်။မေလ၂ ရက် နေ့ညက တနာရီ မိုင် ၁၂၀ နှုန်းဖြင့် တိုက်ခတ်ခဲ့သော ယင်း နာဂစ် ဆိုင်ကလုံး မုန်တိုင်း လေဘေး ဒဏ်ကြောင့် ရန်ကုန်မြို့တွင်လျှပ်စစ်မီးနှင့်တယ်လီဖုန်းလိုင်းများ ဆက်လက်ပြတ်တောက်နေပြီး ရေနှင့် စား သောက်ကုန်၊ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများရှားပါး ပြတ်လပ်၍ ဈေးနှုန်းများ အဆမတန်မြင့်တက်နေကြောင်း သိရသည်။ရန်ကုန်မြို့၌ ယနေ့တွင် ဓာတ်ဆီ ၈၀၀၀ ကျပ်၊ ဒီဇယ်ဆီ ယခင် ၄၅၀၀ ကျပ်မှ ၈၅၀၀-၉၀၀၀ ကျပ်၊ ဆန်ချော တပြည် ၁၂၀၀ ကျပ် မှ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ဆန်ကြမ်း တပြည် ကျပ် ၉၀၀ မှ ၁၂၀၀ ကျပ်၊ စားသုံးဆီ ကျပ် ၄၀၀၀ မှ ၆၀၀၀ ကျပ်၊ အိုင်အိုဒင်းဆား တထုတ် ကျပ် ၁၀၀ မှ ၅၀၀ ကျပ်၊ ကြက်ဥ တလုံး ကျပ် ၁၀၀ မှ ကျပ် ၃၀၀ ၊ ဖရောင်းတိုင် တထုတ် ၅၀၀ ကျပ်မှ ၁၀၀၀ ကျပ်၊ မီးစက် ဖေဖော်ဝါရီ လကုန်ပိုင်းတွင် ကျပ် ၃ သိန်း ၂ သောင်းရှိရာမှ ၆ သိန်း ၇ သောင်း ဈေးဖြစ်နေကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံ များ က ပြောသည်။ အစိုးရက ယမန်နေ့က စတင်ပြီး ကားများကို ဓာတ်ဆီ ခွဲတန်း ၂ ဂါလန်ထုတ်ပေးသည်ဟု သိရသည်။သောက်သုံးရေလည်း အခက်အခဲဖြစ်နေကြပြီး ဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြရသူများပြားကြောင်းနှင့် တရက်လျင် ပျမ်းမျှ ရေဖိုး ကျပ် ၂၀၀၀ ခန့် ကုန်ကြောင်း ရန်ကုန် ကြည့်မြင်တိုင် မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တဦးက ပြောပြသည်။“ရေကတော့ တော်တော် ခက်နေတယ်၊ သောက်ရေ သုံးရေကို သုံးစရာ မရှိဘူး၊ တချို့လူတွေက အင်ယားကန် က ရေကို ခပ်သုံးနေကြတယ်၊ ရေသန့် ဘူးကြီး ၁၂ ဘူးကို ကျပ် ၈၀၀၀ ပေးဝယ်ရတယ်၊ တော်ရုံ အခြေခံ လူတန်း စားတွေက လုံးဝတတ်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ အစစ အရာရာ တော်တော် ရှားနေတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။သောက်သုံးရေကို မူ အစိုးရက ရန်ကုန်မြို့တွင် ယနေ့ ပေးဝေ ကြောင်း သိရသည်။“ရေ ဂါလန် ၂ သိန်းဝေတယ်လို့ သိရတယ်၊ ဘယ်လောက်မှာ လဲ၊ ပြီးတော့ ရေတွေက ဝါနေလို့သုံးလို့ မရဘူး၊ ရေဝယ်သုံးရတဲ့ တိုက်ခန်းတွေမှာဆို အပေါ်အထပ်ကိုတင်ပေးရရင် ကျပ် ၃၅၀၀၊ ကိုယ်တိုင်သယ်ရင် ၁၀၀၀ ကျပ်၊ အရင်တုန်းက ၁၀၀ လောက်ပဲပေးရတယ်၊ ချိုးဖြူပိုက်ထဲမှာလည်း ရေလုံးဝမရှိဘူး”ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။ရန်ကုန်မြို့တွင် လက်ရှိအခြေအနေကြောင့် ဈေးရောင်းချသူတချို့မှာ လုယက်မည်ကို စိုးရိမ်ပြီး ဆိုင်တခါးပိတ်၍ ရောင်းချကြသည်ဟုလည်း သိရသည်။ ယမန်နေ့ညက ရန်ကုန်သီရိမင်္ဂလာဈေး၌ လေဘေး ဒုက္ခသည် ၄၀ ခန့်က ဝင်ရောက် လုယက်မှု တခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ဒေသခံ တဦးကပြောသည်။ဤကဲ့သို့ လူအများ လေဘေးဒုက္ခခံနေရချိန်တွင် စစ်အစိုးရက ယနေ့ထုတ် ၎င်းတို့၏ မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာ ၌ လာမည့် မေလ ၁၀ ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မူကြမ်း အတည်ပြု ဆန္ဒခံယူပွဲကို မဖြစ် မနေ ပြုလုပ်မည်ဟု ကြေညာခြင်းသည် ပြည်သူများ၏ ပျက်စီးဆုံးရှုံးဒုက္ခခံစားရမှုများကို လျစ်လျူရှုခြင်းဖြစ် ကြောင်းကို လည်း ဒေသခံများကြားတွင် ပြောဆိုနေကြောင်းသိရသည်။ရန်ကုန် စမ်းချောင်းမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တဦးက“ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အစိုးရက လေဘေးကို စိတ်မဝင်စား ဘူး၊ သူတို့လုပ်ချင်တာကို ဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ ပြောတာပဲ၊ ရန်ကုန်မှာ ရှိနေတဲ့ လူတွေက အခုလောလောဆယ် ရေ ပြဿနာ၊ မီးပြဿနာ၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကလည်း အဆမတန် မြင့်တက်နေတော့ စားဝတ်နေရေး ပြဿနာတွေနဲ့ ဆိုတော့ အဲဒါကိုပဲ အာရုံ စိုက်နေကြတာ၊ အဲဒီ ဆန္ဒမဲ ကိစ္စဘက်ကို စိတ်မဝင်စားဘူး”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။စစ်အစိုးရက သတင်းစာတွင် သောကြာနေ့က ထုတ်ပြန်သော ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ ကြေညာချက်ကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ချက် အပါအဝင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ဆန္ဒခံယူပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲပေးရန် ပြည်သူလူထုက စိတ် အားထက်သန်နေကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ များက ထောက်ခံကြိုဆိုလျှက်ရှိသော ၎င်းတို့၏ လမ်းပြ မြေပုံ ၇ ဆင့် အတိုင်း ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စသည့် အချက် ၄ ချက်ပါဝင်သည့် ကြေညာချက်ကို မေလ ၄ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ဗိုလ်မှူးကြီးသန့်ရှင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီ News
Skilled workers, busine...